Wadahadallada ku saabsan sinnaanta ka dhex jirta sadaqada ayaa inta badan diiradda saaraya qaybinta kheyraadka, garab muhiim u ah shimbirta. Tani waa sheeko ku saabsan garabka kale - awood qeybsiga. Sawirka Sawirka: istock / sharply_done
Sheekada McKnight Artist Fellowships Qiimaha Bulshada
Ku cusub 2021, barnaamijka 'McKnight Artist Fellowships' barnaamijka wuxuu hirgelinayaa bayaanka qiyamka bulshada ee wadaagga ah ee ka socda 14 urur ee ay wada shaqeeyaan. Bayaankani wuxuu cadeynayaa ballanqaad wada jir ah oo loo abuurayo loona taageerayo bulsho farshaxan ah oo shaqsiyaadka oo dhan loola dhaqmo si ixtiraam iyo sharaf leh, iyo abuurista iyo ilaalinta xiriirka ka xor ah waxyeellada, eexda, iyo dhibaataynta.
Ballanqaadkan la wadaago wuxuu yimid xilli bulshooyinka ku nool Minnesota iyo guud ahaan dalka ay ku loollamayaan sida ugu wanaagsan ee loo wajihi karo arrimaha nabadgelyada bulshada waxayna raadinayaan bedello ku aaddan xad-dhaafka booliiska hay'adaha. Waxa xusid mudan, ka doodista sinnaanta ka jirta sadaqada inta badan waxay si gaar ah diiradda u saartaa qaybinta kheyraadka, taas oo ah baal muhiim u ah shimbirta. Waxa soo socdaa waa sheeko ku saabsan garabka kale - wadaagga awoodda — iyo sida hawlgelinta firfircoonida iyo rabitaanka wax u barashada la-hawlgalayaasheena ay u horseedday go'aan-qaadasho wanaagsan, horumarinta siyaasadda, iyo ku-dhaqanka McKnight iyo jaaliyadeena bahwadaagta fanka.
McKnight Artist Fellowships Bayaanka Qiimaha Bulshada
Ku soo dhowow bulshada McKnight Artist Fellowships! Machadka McKnight Foundation iyo la-hawlgalayaasha maamulka ee 'McKnight Artist Fellowships' waxaa ka go'an inay abuuraan oo ay taageeraan bulsho farshaxan ah oo shaqsiyaadka oo dhan loola dhaqmo si ixtiraam iyo sharaf leh. Bulshada McKnight Artist Fellowships waxaa ka mid ah dadka la shaqeeya barnaamijka is weheshada haddii ay yihiin codsadayaal, wehel, guddiyo, qandaraaslayaal, iskaashatooyin, maamuleyaal wehel, ama shaqaale McKnight Foundation iyo ururada iskaashatada.
Bulsho ahaan, waxaa naga go'an inaan abuurno oo aan ilaalino cilaaqaadka ka xor ah waxyeelada, eexda, iyo dhibaataynta. Xubnaha bulshada waxay ku heshiiyeen inay si toos ah oo daah furnaan ah ula xiriiraan arrimaha la xiriira anshaxa oo saameyn xun ku yeelan kara fayoobaanta xubnaha iyo ururada ka qeyb galaya.
Xaalada dacwada, talaabo sharci ah, ama xukun, Hay'adda McKnight Foundation iyo la-hawlgalayaasha barnaamijkeeda wadaagga farshaxanka ayaa soo ururin kara oo qiimeyn kara macluumaadka la xiriira. Haddii loo arko inay lagama maarmaan tahay, Hay'adda McKnight Foundation iyo bahwadaagta barnaamijkeeda wadaagga farshaxanku waxay qaadi karaan tallaabo maamul oo ay ka mid yihiin ku-talinta ka-qaybgalka dib-u-heshiisiinta ama dib-u-soo-celinta caddaaladda; u-qalmin codsi; joojinta heshiiska; iyo soo celinta iyo / ama joojinta wehelka.
Tbeeshiisu waxay noqon doontaa waxaan ka dhigno. Hadafkeenu waa inaan si wada jir ah u abuurno khibrad ay ku wada guuleystaan dhammaan farshaxanada iyo xubnaha ka tirsan bulshada McKnight Artist Fellowships.
Ku saabsan McKnight Artist Fellowships
Akhri sheekada oo dhan
Wada-hawlgalayaasha Barnaamijka Wada-hawlgalayaasha
Xarunta Sare ee Daabacaadda
Minneapolis College of Art iyo Design
Xarunta Dhulka Waqooyiga
Golaha Masraxa ee Pillsbury House
Rugta Ciyaaraha '